नचल्दा सम्म को हो को हो, चलेपछि माया मोह – Mero Film
नचल्दा सम्म को हो को हो, चलेपछि माया मोह
२०७५ भदौ १३ गते १५:३५
अभिनेता प्रशान्त ताम्राकार नचल्दा उनलाई कसले मत्तलव गरेको थियो र । मुखौटा फिल्मले पानी नभन्दा प्रशान्तलाई फिल्ममा लिन कसैले मन गरेको थियो र ? तर, जब प्रशान्त ऐश्वर्य फिल्म चलेपछि खतरनाक भिलेनको रुपमा उदाए । यसपछि त के चाहियो र ? प्रशान्त चलेका हुन् कि फिल्म भनेर कसैले वुझेनन् । भकाभक मागेजति पारिश्रमिक दिदै फिल्ममा लिइरहेका छन् ।
जय शम्भु भन्ने फिल्मको भिलेन भएपनि प्रशान्त नचलेको त सबैले वुझेका होलान् । तर, प्रशान्तलाई लिन निर्माताले सोच्ने गरेका छैनन् । अब त हुँदाहुँदै प्रशान्त ताम्राकारलाई हिरोइनसँग नचाउन पनि निर्माताले भ्याए छन् । प्रशान्त पनि हिरोइनसँग सकीनसकी हात हल्लाएर नाचेको कस्मिक लभको गीत हेर्दा थाहा हुन्छ ।
आफू के मा चलेको हो र दर्शकले कस्तो गेटअपमा मन पराउँछन् भन्ने नवुझेर प्रशान्त अब हिरोइनसँग नाच्न थालेका छन् । नचलेसम्म प्रशान्त ताम्राकार को हो को हो थिए । अब चलेपछि त माया मोह पो हुन थालेछन् । प्रशान्तले गीतमा पनि नाच्ने, भिलेन र हिरो जे आएपनि खेल्ने हो भने त मुखौटाको इतिहास दोहिरन समय लाग्छ होला र ?